Swart Donkey: Kufunda
Ndifuna ukuzama ukubhala izithuba kwezinye iilwimi. Baya kuba buhlungu, kodwa ndivulekile kakhulu kwimpendulo. Ndiza kusebenzisa izixhobo ezikhoyo. Oyintloko, kuba ndikulungele ukubukeka njenge-idiot ebantwini. Esinye isixhobo kukuba kukho abaninzi abantu abakwaziyo ukusetyenziswa kwezinye iilwimi. Njengoko i-bubble yesiNgesi ndihlala ngokuqhelekileyo kuthetha ukuba asiyi kuphulaphula amagama angaphantsi. Nceda undincede. Ngokucacileyo ndandizibhalelanga ngokwayo. Ndisebenzisa i-Google Translate. Ndisebenzisa iMemrise.
Posted by Swart Donkey at 5:58 pm
Labels: Communication, isiXhosa, Languages, South Africa